10% Discount on selected items Details
Promotion at Royal9Cafe & Food House
အစားကောင်းသောက်ကောင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူများအတွက် ထိုင်းစတိုင် ၊ တရုတ်အပါအဝင် Menu အစုံအလင်ရနိုင်တဲ့ Royal9မှာ B&F Weekly Promotions နဲ့ 10% Discount ရယူကြမယ်။
Royal9Café & Food House မှာဆိုရင် အစားသောက်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေစုပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာမျိုး ၊ Birthday Party ၊ Staff Party ကျင်းပချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးနူန်း သက်သက်သာသာနဲ့ Menu စုံစုံလင်လင်ရနိုင်ပြီး တော်တော်လေး အဆင်ပြေစေတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ Royal9မှာဆိုရင် တရုတ်အစားစာ၊ ထိုင်းအစားစာ၊ အိန္ဒိယအစားစာ တွေကို တစ်နေရာ တည်းမှာစုံစုံလင်လင်ရနိုင်မှာပါ။ 10% Promotion ပေးထားတဲ့ Menu Title လေးတွေကတော့ Fried Rice, Fried Noddle, Soups, Special One Portion, Vegetables, Ala Carte Special Min Cook, All Item နီးပါးပါပဲနော်… ကဲ..ဒါဆို ထမင်းကြော်တွေနဲ့ Soup လေးနဲ့ပဲတွဲစားကြမလား၊ ထမင်းဖြူ နဲ့ ကြက်၊ ဝက် ၊ ပင်လယ်စာ အစုံနဲ့ ထူးထူးခြားခြား Menu လေးတွေနဲ့ တွဲစားမလား၊ ဒါမှမဟုတ် Ala Carte Special Min Cook ထဲက ဂဏန်းမာဆလာ၊ ငါးသံပုရာပေါင်ပဲစားကြမလား.. ?
ဒီဆိုင်လေးမှာ နာမည်ကြီးတာကတော့ Mini Pizza လေးတွေပါပဲ … Pizza အမျိုးပေါင်း (13) မျိုးတောင်ရှိတဲ့အထဲကမှ လူအကြိုက်များဆုံး Pizza လေးကတော့ Royal9Special Cheese Pizza လေး… Cheesy ဖြစ်ပေမဲ့ အီတဲ့ အရသာလေးမခံစားရဘူးနော်… စားလိုက်ရင် Cheese လေးတွေ တန်းပြီးပါလာတာက အမိုက်ဆုံးပါပဲ … ဒီလိုတစ်နေရာတည်းမှပဲ Menu အစုံအလင်ရနိုင်တဲ့ Royal9ကိုတစ်ခေါ်က်လောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားရောက် မြည်းစမ်းဖို့ မင်မင်ကနေ တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…Promotions ကိုေတာ့ Take away အတြက္ပါခံစားခြင့္ရွိပါတယ္…
Royal9Café & Food House လိပ္စာေလးကေတာ့
No. 285, Maha Bandula Park Street (Upper), Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.
ဖုန္းနံပါတ္ - 09 44155 6601
Royal9Café & Food House ရဲ့ Promotions ကြီးကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ Royal9Café & Food House စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon လေးတွေရှိရင်လည်း Coupon လေးနဲ့ Discount ရယူနိုင်ပါတယ်နော် …
Mobile App အသံုးျပဳပံုနဲ႔ ပက္သက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Promotions အေၾကာင္းရာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 09-969910128,09-969910115 တို႔ကိုရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။
Royal9Cafe & Food House shop
No. (285), Maha Bandula Park Street (Upper), Kyauktada Township, Yangon.
Phone : 09 44155 6601